आज बिवाह हुँदै थियो तर राति नै सदाको लागि अस्ताइन् पुनम ! – Kavrepati
Home / समाचार / आज बिवाह हुँदै थियो तर राति नै सदाको लागि अस्ताइन् पुनम !
आज बिवाह हुँदै थियो तर राति नै सदाको लागि अस्ताइन् पुनम !
admin July 17, 2021	समाचार Leaveacomment 85 Views
झारखंडबाट एउटा दुखद समाचार आयो। जहाँ घरमा विवाहको खुशी शोकमा परिणत भयो। २३ वर्षीया पूनम कुमारीको विवाह आज १६ जुलाईमा हुदै थियो। विवाहको तयारीहरू घरमा तीव्रताका साथ चलिरहेका थिए। बुधबारको रात घरमा हल्दीको समारोह पनि राम्रोसँग भएको थियो। छोरीको विवाहबाट परिवार अत्यन्तै खुसी थिए। तर केहि समय पछि दुलही पूनमको सर्पको टोकाई बाट निधन भयो।
हल्दी समारोह पछि, पूनम उनको कोठामा सुत्न गइन्। त्यहाँ वि-षालु सर्पले डस्दा पूनमको मृत्यु भयो। बिहीबार पूनमका बुबा सत्येन्द्र प्रसादले आफ्नी छोरीको डोलीको सट्टा श-व उठाएर घाट लानुपरेको थियो। सर्पले टो-केपछि पूनम ठूलो स्वरले कराईन, तुरुन्त परिवारका सदस्यहरू उनको कोठामा पुगे र उनलाई तत्काल अस्पताल लगियो। जहाँ डाक्टरहरूले उनलाई मृ-त घोषणा गरे। त्यसपछि बरवडा थाना क्षेत्रको कुल्बेदा गाउँमा विवाहको खुशीमा सन्नाटा छायो ।
पूनम बीएसएस महिला कलेजकी छात्रा थिइन। उनको विवाह आज हुँदै थियो जसको बारेमा घरमा खुशीको वातावरण रहेको थियो। तर परिवारका सदस्यहरू सोकमा डुबेका छन्।
गाउँलेहरू भन्छन कि बर्षा यामको कारण साँप मान्छेहरूको घर आउँदछ। यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म धेरै मानिसहरू सर्पको टो-काइले म-रेका छन्। पूनमको मृत्युपछि यस क्षेत्रमा सर्वसाधारण त्रसित र सोकमा डुबेका छन्। मानिसहरू डरले निदाइरहेका छैनन्। मानिसहरू महसुस गर्दैछन् कि नीहरूको घरमा साँप त आउदैन। यस छेत्रका वरपरका क्षेत्रबाट धेरै घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ। प्रशासनले लगातार मानिसहरूलाई सचेत गराउँदै आएको छ।*
Previous आहा ! यति राम्री बेलुकीका मनै लोभ्याउने टिकटक भिडियोहरु (हेर्नुस् भिडियो)
Next रामकुमारी झाँक्री शिक्षामन्त्री बन्दै !